चौतर्फी घेराबन्दीले सिटमा दोस्रो देखिए पनि समग्रमा एमालेको जनमत बढेको छ : उपाध्यक्ष नेम्वाङ « Nepal Page
चौतर्फी घेराबन्दीले सिटमा दोस्रो देखिए पनि समग्रमा एमालेको जनमत बढेको छ : उपाध्यक्ष नेम्वाङ
अघिल्लो निर्वाचनमा पहिलो भएको नेकपा (एमाले) यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनका कारण मात्रै नेपाली कांग्रेस पहिलो हुन पुगेको तर्क गर्ने एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ तमाम घेराबन्दीका कारण पनि एमाले दोस्रो स्थानमा रहन सक्नुलाई पार्टीको विजयका रूपमा लिन्छन् । उनी अगाडि भन्छन्, ‘गठबन्धन गरेर जानु नै उहाँहरूको पहिलो पराजय थियो, त्यसमाथि पाँच दलीय गठबन्धनले नपुगेर अन्य दलसमेत जोड्दा पनि एमालेलाई दोस्रो स्थानभन्दा तल झार्न नसक्नु उहाँहरू थप पराजित हुनु हो । एक्लाएक्लै निर्वाचन लडेर विजय हुने हिम्मत् त एमालेसँग रहेनछ भनेर यो निर्वाचनले पुष्टि गरेको छ ।’
उनै नेम्वाङसँग निर्वाचन, निर्वाचनको परिणामलगायत विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
स्थानीय तहमा एमालेले नमज्जासँग पराजय भोग्यो नि ? यो हालतमा पुग्नुहुन्छ भन्ने सोच्नुभएको थियो ?
सरसर्ती हेर्दा त्यस्तो लागे पनि यो चुनावबाट एमालेले एउटा नसोचेको विजय हासिल गरेको अवस्था छ । जब सत्तारूढ दलमा आबद्ध पाँच दलले गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाने निर्णय लिनुभएको थियो, त्यो बेलादेखि नै मैले भन्दै आएको थिएँ कि पाँच दल त्यसमा सत्तारूढ दल नै गठबन्धनमा मिलेर जानुको अर्थ एमालेले निर्वाचनअघि नै विजय हासिल गरिसक्यो । यो कुरा त मैले मात्रै होइन, राजनीतिक विश्लेषकहरूले नै भनेका थिए ।
त्यो त चित्त बुझाउने कुरा होला । जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने जनप्रतिनिधि त तपाईंको पार्टीबाट नै हुन सकेनन् । धेरै जसो त कांग्रेस र माओवादीको भएको देखियो । मुख्यतः जनतालाई ‘डेलिभरि’ दिने कुरा होला नि ?
सिट जति त अरु दलले कब्जा गरिसके । आत्तिएको छैन भन्नु त मनको लड्डु घ्युसँग खाए जस्तो भएन र ?
यो त जनमतले नै देखाइसक्यो त ? देखाएन र ? एमालेलाई सारा घेराबन्दी गरेर गठबन्धन गरेर जानु भनेको सुरूमा नै राजनीतिक रूपमा पराजय हुनु हो । त्यसले पनि नपुगेर कुनै पनि पार्टीका सभापति होइन, प्रधानमन्त्री स्वयंले आमसभामार्फत् गठबन्धनलाई जिताउनु जनताको कर्तब्य हो भनेर भाषण गर्नुभयो । एउटा देशका प्रधानमन्त्रीले यसो भन्न मिल्छ ? तर, निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत गठबन्धनलाई जिताउन जनतालाई दबाब दिनुभयो । खासमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट भन्नुपर्ने कुरा यति मात्र थियो– स्थानीय तहको निर्वाचनमा डर, त्रास र भयरहित भएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूले रोजेको पार्टीलाई जिताउनुहोस् भनेर आह्वान गर्नुपर्दथ्यो । तर, उहाँले त्यसो नभनेर गठबन्धन आबद्ध दललाई जिताउनु जनताको कर्तब्य हो भनेर गठबन्धनको पक्षमा मत माग्नुभयो । देशको अभिभावक मानिएको प्रधानमन्त्रीले यसो भन्न मिल्छ ? तर, उहाँले निर्वाचनको दौरानमा मन परेका पार्टी रोज्न पाइँदैन, जसरी पनि गठबन्धनलाई मत दिनुपर्छ भन्ने आशयसहित पदीय मर्यादा नै भुलेर निर्वाचनमा जानुभयो । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसारमा यसरी मत माग्छन् । मैले चाहिँ त कहीँ कतै थाहा पाएको छैन ।
जनतालाई धक्क्याएर मत माग्ने काम शीर्ष नेताले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री पत्नीले समेत गर्नुभयो । जिताएको अवस्थामा स्थानीय पालिकामा पैसा पठाउने, नजिताए नपठाउनेसम्म भन्नुभयो ।
जिताउने परिवारलाई मलेसिया हो कि साउदी अरब पठाउनेसम्मको अभिव्यक्ति दिनुभयो । प्रधानमन्त्री पत्नीले त्यो भूमिकामा बसेर यस्तो बोल्न मिल्छ ? तर, बोलिदिनुभयो । त्यति मात्र होइन, निर्वाचनपछि पनि राज्य शक्ति दुरुपयोग गरेर एमालेलाई एक्ल्याउने काम गरियो । पार्टी महासचिवले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् भनिसक्नुभएको छ । तसर्थ, म भन्छु– एमालेको केही सिटमा तलमाथि भयो होला तर जनमत घटेको छैन । बरु, एमालेले एक्लैले अरू दललाई यो निर्वाचनमार्फत् ‘डिफेन्स’ मा राखिदिएको छ ।
एउटा घटना स्मरण गराउँछु– २०४७ सालपछि पञ्चहरूलाई अझ कमजोर बनाउन र पराजित गर्न फेरि सँगै लडेर जानुपर्ला कि भन्ने थियो । जननेता मदन भण्डारीले कांग्रेस नेताहरूसँग प्रस्ताव गर्दैगर्दा मलाई अझ पनि सम्झना छ कि किसुनजीले भनेका थिए, ‘२०१५ सालमा चार सिट पनि नजितेका ‘कम्युनिस्ट भैया’हरूले १५ सिट जिते मात्र पनि खसी काटेर खुवाउँछु । एक हजार सिटले त कांग्रेसलाई पनि पुग्दैन ।’ यति भनेपछि खाएको पान थुक्नुभयो । पछि जनमत कसको कति रहेछ भन्ने त अर्को निर्वाचन परिणामले नै देखाइदियो । एक हजार सिटले नपुग्ने भन्ने कांग्रेस कहाँ पुग्यो त ? त्यसैले जनमतलाई कहिल्यै पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । त्यसैले सिटभन्दा जनमत ठुलो हो ।
सत्तारूढ दलले त स्थानीय तहमा विजय हासिल गरेर प्रतिगमनलाई पराजित गर्यौँ भनिरहेका छन् नि ?
प्रतिगमन के हो ? हाम्रो पार्टी अध्यक्षले नयाँ जनमतका लागि भन्दै निर्वाचनको मिति नै घोषणा गरेर जानुभएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदियो । एकपटक त परमादेशबाट नै । तर, पनि हाम्रो पार्टीले कानुनी राज्य बलियो बनाउनुपर्छ भनेर त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्यो । चुनावमा गयो । के ओलीजीले मात्रै संसद विघटन गरेको हो र ? त्यसअघि गिरिजाबाबुले पनि संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । मनमोहनजीले पनि संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । सूर्यबहादुर थापाले पनि संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । यो मुलुकमा ६÷६ पटक संसद् विघटन भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको नजिर पनि छ । तर, ओलीजीले गरेको संसद् विघटन चाहिँ प्रतिगमन ? अनि अरूले गरेको चाहिँ अग्रगमन ? यो त राजनीतिक खपतका लागि बोलिएको विषय मात्रै हो ।
योभन्दा केही अरू देख्नुहुन्छ । त्यसपछि यो पनि बिर्सन हुन्न कि ओलीजीले गरेको संसद् विघटनलाई प्रतिगमन भन्नेहरू आफैं पुनः विघटन गर्न नलागेका होइनन् र ? स्थानीय तह निर्वाचन सारेर संघीय संसद्को निर्वाचन गरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि नगरेका होइनन् र ? के संसद् विघटन नगरी संघीय संसद्को ‘अर्ली इलेक्सन’ हुनसक्थ्यो र ? त्यसैले संसद् विघटनको प्रस्ताव त सर्वोच्चको परमादेशबाट पछि पनि सत्तारूढ दलबाट आएको हो । हामीले बरु त्यसको ठाडो प्रतिवाद गर्यौँ, कि संसद् विघटन गरे ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जाने सत्तारूढ दलको चाहनालाई अवरोध गरेर मुलुकलाई स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ होमायौँ । त्यसैले उनीहरूले गरे प्रतिगमन नहुने र अग्रमन हुने अनि हामीले गरेर प्रतिगमन हुने ? यो त राजनीतिक खपतका लागि बोलिएको विषय मात्रै हो । यसमा कुनै तुक छैन ।
अहिल्लो पटक हामीले महानगरमा काठमाडौँ र पोखरामा विजय हासिल गरेका थियौँ । यो पटक गठबन्धनका कारण हाम्रो पक्षमा मेयरका पक्षमा परिणाम आएन होला वा नआउन पनि सक्ला । मतगणना जारी नै छ । तर, हाम्रा उपमेयरहरूले सानदारका साथ विजय हासिल गरेका छन्, गरिरहेका छन् यो त भुल्नु भएन नि ? त्यो काठमाडौँ होस् वा विराटनगर वा अन्यत्र । पाँच दलीय गठबन्धनलाई हराउँदै ‘कोर मधेस’ भनिने कलैयामा विजय हासिल गरेका छौँ । अन्त पनि हाम्रो त्यति अवस्था बिग्रिसकेको छैन ।
सबैतिर पराजय भोगेपछि एमालेले वाम गठबन्धनको कुरा गर्न सुरु गर्यो भनिन्छ नि ?
हाम्रो पार्टी तहमा यो कुरा भएको देखिएको छैन । केही साथीले गरिरहेका हुन सक्लान्, नहोला भन्न पनि सकिन्न ।
सम्भवः छ र ? असम्भव छ र ? आकाश–पाताल नै फरक भएको र एक अर्कासँग विचार नै नमिलेका दलहरूले गठबन्धन गरेर चुनावमा गए । हामी त झन् समान विचार भएका दलहरूसँग मिलेर जाने कुरा नहुन सक्छ र ? हेर्दै जाउँ ।
काठमाडौं, १८ असार । बीरगञ्जमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएर अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूसँग असन्तुष्ट
केन्द्रीय समितिको नाम टुंगो लगाउँदै लोसपा
काठमाडौँ । केन्द्रीय सदस्यको नाम टुंगो लगाउने विषयसहितमा छलफल गर्न महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक यही असार २७ र
काठमाडौं, १८ असार । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले आइतबार सचिवालय बैठक बोलाएको छ ।
सुर्खेत । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले कर्णाली प्रदेश सभा बैठकमा अवरोध जारी रहँदा सदन
काठमाडौँ । आजमात्रै निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना केन्द्रीय सदस्यहरुको
काठमाडौँ । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले आइतबार सचिवालय बैठक बोलाएको छ । केन्द्रीय कार्यालय
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । कांग्रेसका मुख्य सचिव